‘ई–सेवा मनी ट्रान्सफरको कसैसँग प्रतिस्पर्धा छैन, हामी फरक तर सुरक्षित सेवा दिंदैछौं साथमा चाडपर्वमा दिनदिनै उपहार पनि’ - Aarthiknews
‘ई–सेवा मनी ट्रान्सफर डिजिटल रेमिट्यान्सको क्षेत्रमा स्थापित ब्रान्ड बनिसकेको छ। नेपालको सबैभन्दा कान्छो रेमिट्यान्स कम्पनी भएर पनि रेमिट्यान्स व्यापारको उल्लेखनीय बजार हिस्सामा पकड जमाउन सफल यो रेमिट्यान्स कम्पनीका आफ्नै बिशेषताहरु छन्। रेमिट्यान्स भित्राउन नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई केन्द्रमा राखेको यो कम्पनीले हिन्दु धर्मावलम्बी नेपालीहरूको प्रमुख चाड दसैँ तिहारको उपलक्ष्यमा विशेष योजनाहरू समेत सार्वजनिक गर्दै छ। यी नै विषय र सन्दर्भको सेरोफेरोमा बसेर आर्थिक न्युज डटकमले ई–सेवा मनी ट्रान्सफरका जनरल म्यानेजर सागर खनालसँग रोचक संवाद गरेको छ। प्रस्तुत छ, खनालसँगको वार्ताको सम्पादित अंशः
लगभग रेमिट्यान्सको व्यापार घट्दो अवस्थामा छ भने जस्तो देखिँदै गर्दा यो व्यापार सुरु गर्नु भो । के देख्नु भो यसमा भविष्य ?
तपाइलाई थाहै छ, हामीले ई–सेवा निकै लामो समय देखी सञ्चालन गर्दै आएका छौँ । अहिले रेमिट्यान्स सुरु गर्ने हामी कान्छो कम्पनी बन्यौँ । हाल रेमिट्यान्स शुल्क धेरै नै महँगो छ । हामी यता किन आकर्षित भयौँ भने त्यसलाई सस्तो बनाएर सामाजिक रूपमा योगदान गर्दै यो व्यापार गर्ने सम्भावना हामीले देख्यौँ । हाम्रो डिजिटल रेमिट्यान्सको भिजन नै हामीलाई यो व्यापारमा डोर्याउने तत्व हो ।
हामीसँग पहिले नै डिजिटल वालेट र अन्य भुक्तानी गेट वेहरु छन् । कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हाम्रै माध्यमबाट रकम प्राप्त गर्ने गरिरहेको बेला प्राविधिक रूपमा हामीलाई धेरै नै सहजता छ । त्यही अवसरलाई प्रयोग गरेर ग्राहकलाई सस्तोमा राम्रो सेवा दिँदै रेमिट्यान्सको शुल्क काम गर्ने सरकारको जुन लक्ष्य छ त्यसमा पनि साथ दिन हामी यो व्यापारमा आएका हौँ ।
तर, प्रतिस्पर्धा त ठुलो छ नि ?
हो, अहिले ५२ वटा रेमिट्यान्स कम्पनी छन् । त्यस बाहेक अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुले पनि लगभग यसको काम गर्छन् । सबैको आ—आफ्नो प्रोडक्टहरु छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो सबैमा आएको पैैसा भनेको ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । गएको आर्थिक वर्षको अवधिमा नै हामी लगभग बजार हिस्साको आधारमा हेर्ने हो भने सातौँदेखि आठौँ स्थानमा आइपुगेका छौँ । डिजिटल रेमिट्यान्स, पारदर्शी सेवा र छिटोछरितो रेमिट्यान्स सुविधाले हामीलाई अरु भन्दा पृथक बनाएको छ । हामीले बजारमा अरु भन्दा यो चाँही केहि फरक छ है भन्ने बनाइसकेका छौँ । ग्राहकले रेमिट्यान्स तुरुन्तै पाउनु पर्छ भन्ने लक्ष्यले हामीले त्यसलाई नै फोकस गरेर काम गरिरहेका छौँ । अरुको भन्दा हाम्रो सेवा चाँही फरक र पृथक छ भन्ने तरिकाले नै हामीले काम गरिरहेका छौं ।
यो डिजिटल रेमिट्यान्स र अन्य रेमिट्यान्समा के फरक छ ?
धेरै फरक छ, हामीसँग अहिले नै लगभग ५० लाख ग्राहकहरू डिजिटल माध्यमबाट हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई त्यहीँबाट रेमिट्यान्समा जोड्ने हो । यसले गर्दा हामीले विगत छोटो समयमा नै विश्वका प्रमुख रेमिट्यान्स कम्पनीहरूसँग हाम्रो साझेदारी हुन सक्यो । विश्वका धेरैजसो ठुला रेमिट्यान्स कम्पनीहरुसँग हामीले काम शुरु गरिसकेका छौं । ती मध्ये विकसित देशका कम्पनीहरूबाट आउने रेमिट्यान्स अहिले हाम्रो डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत नै आइरहेको छ । यसो हुँदा हामीसँग नगदमा कारोबार नै धेरै छैन । लगभग ९० प्रतिशत डिजिटल र १० प्रतिशत नगदमा हाम्रो कारोबार हुन्छ । यो नै प्रमुख फरक हो । त्यसबाहेक डिजिटल माध्यमबाट पठाउँदा उसले कुनबाट कति कम शुल्क र कति दरमा पठाउँन सकिन्छ त्यो कुरा हेर्न सक्छ ।
तर, जुन मानिसको बैंक खाता नै छैन उनीहरूलाई कसरी भुक्तानी गर्नुहुन्छ ?
हामीले धेरैलाई प्रोत्साहित गर्ने भनेको डिजिटल नै हो । जब नगदमा नै भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी आउँछ त्यस्तोलाई सकेसम्म हामी भुक्तानी लिने मान्छेलाई ई-सेवा वालेटमा खाता खोल्न लगाएर अनि त्यसैमा भुक्तानी दिन्छौँ । त्यसो नहुँदा मात्र हो नगदमा नै भुक्तानी दिने भनेको । यसरी हामी धेरै भन्दा धेरैलाई डिजिटलमा जोड्दै छौँ ।
नगदमा गर्दा र डिजिटल गर्दा ग्राहकले पाउने अतिरिक्त लाभ के हो ?
उहाँहरूले पाउने लाभ भनेको यो सुरक्षित छ । नगद बोकेर हिँड्नु अहिले यता लिने र उता पठाउने सबैको लागि जोखिमयुक्त हो । त्यसको लागि अतिरिक्त समय समेत लाग्छ । उता पठाउन जानुपर्यो यता लिन जानुपर्यो । फेरी आउँन पनि समय लाग्छ । पिन कोड चाहियो । परिचयपत्र चाहियो । तर, मोबाइल वा वालेटमा त तुरुन्त आउँछ । कुनै झन्झट भएन । फेरी डिजिटल माध्यमबाट पठाउँदा उसले कुनबाट कति कम शुल्क लाग्छ त्यो हेर्न सक्छ । तर, भौतिक रूपमा पठाउने हो भने पैसा बोकेर कहाँ सस्तोमा पठाउने ठाउँ पाइन्छ भन्दै हिँड्नु पर्ने हुन्छ । यस्ता धेरै छन् लाभका कुराहरू छन् ।
हाल नेपालमा चलिरहेका रेमिट्यान्स कम्पनी मध्ये तपाइको प्रतिस्पर्धा को सँग छ ?
हाम्रो कोहीसँग प्रतिस्पर्धा नै छैन । उनीहरूको अधिकांश कारोबार नगदमा छ । तर, हाम्रो ९० प्रतिशत कारोबार डिजिटल छ । हाम्रो उद्देश्य भनेको परम्परागत रेमिट्यान्सलाई डिजिटल रेमिट्ययान्समा कन्भर्ट गरि छिटो तथा कम शुल्कमा रेमिट्यान्स सेवा उपलब्ध गराउने हो ।
सरकारले हालै बजेट मार्फत बैंकमा रेमिट्यान्स पठाउँदा थप एक प्रतिशत ब्याज दिने घोषणा गर्यो । त्यसले कस्तो प्रभाव पार्ला ?
यसमा सकेसम्म बैंक खातामै रेमिट्यान्स पठाउन भन्ने तरिकाले प्रमोट गर्न खोजिएको छ । सँगसंगै लिगल च्यानललाई पनि प्रमोट गर्न खोजिएको देखिन्छ । हामीले पनि सकेसम्म बैंक र वालेटमै पैसा पठाउनु पर्छ भनेर प्रमोट गरिरहेका छौँ । कसैले क्यासमै पठाएको छ भने पनि त्यसलाई त्यसलाई बैंक र वालेटमा पनि रिसिब गर्न मिल्ने फिचरमा हामी अहिले काम गरिहेका छौं । क्यासमै रेमिट्यान्स आएको छ तर ग्राहकसँग पिन नम्बर छ, बैंक अकाउन्ट वा वालेट छ भने त्यो क्यासलाई पनि कन्भर्ट गर्न मिल्ने गरेर काम गरिहेका छौं । त्यस्तै, यो १ प्रतिशत ब्याज वाला कुरामा हामीले हाम्रा सम्पूर्ण साझेदार कम्पनीहरुलाई जानकारी दिइसकेका छौं । बैंकहरुले शुरु गर्ने वित्तिकै हामीले हाम्रो तर्फबाट पनि शुरु गर्छौँ ।
यो सरकारले डिजिटल रेमिट्यान्सलाई नै प्रवर्द्धन गर्न खोजेको हो । खातामा पठाउनु भनेको त्यही हो । अहिले हामी पनि कसैले नगदमा पैसा पठाएको छ भने त्यसलाई वालेटमा वा बैंक खातामा जेमा पनि रिसिभ गर्न मिल्ने समेत फिचर समेत विकास गरिरहेका छौँ । सरकारको यो नीतिले हामीलाई सहयोग नै गर्छ ।
यो रेमिट्यान्स व्यापारको बजारीकरण कतिको सहज रहेछ ?
हो, सुरुमा हामीसँग काम गर्न कोही तयार थिएन किनकि जहाँ पनि पुरानो तरिकाको रेमिट्यान्स कम्पनीहरू पार्टनर थिए । त्यसैले हामीले आधुनिक (डिजिटल) प्रणाली बलिया भएका युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान लगायतका देशमा त्यस्ता डिजिटल कारोबार गर्ने पार्टनर खोज्यौँ । उनीहरूसँगको सहकार्यमा व्यापार सहज भयो। अहिले मध्यपूर्व, खाडी मुलुक र मलेसियामा पनि पार्टनरहरू छन्।
बैंकहरुको पनि सबैको आ-आफ्नो एप छ, उनीहरुले सिधै कारोबार गरिरहेका छन् । यस्तो बेलामा रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको कारोबार घटेको पो हो की ?
समग्रमा क्यास चाँही घटेको हो जस्तो लाग्छ । ओभरल रेमिट्यान्स चाँही बढेको छ जस्तो लाग्छ । यसरी हेर्दा भोलुम घटेको छैन तर, ट्रेडिसनल ग्राहक डिजिटलतिर माइग्रेट भएका छन् । सिधै डिजिटल कारोबार गर्नेहरु बढिरहेका छन् ।
हुन्डीको समस्या अझै पनि छ, त्यसलाई कम गर्न के गर्नुपर्ला ?
यसमा त जनचेतना फैलाउने र सरकारले त्यस्ता कारोबारीलाई कडा कारबाही गर्ने नै हो। यसरी हुन्डी मार्फत कारोबार गर्नु ठुलो जोखिम हो है भनेर मानिसहरूलाई बुझाउने हो भने पनि धेरै नै कम हुन्छ। त्यसबाहेक डिजिटल माध्यमबाट सबैभन्दा छिटो र सुरक्षित ढगले पैसा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने पनि आम मानिसहरूलाई बुझाउनु पर्यो ।
अन्त्यमा, ई–सेवा रेमिटका नयाँ कस्ता योजना वा कार्यक्रम आउँदै छन् ?
हामी नेपालका प्रमुख चाडहरूको पुर्वसन्ध्यामा छौँ । यस्तो बेला सामान्य भन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्रिने गर्छ । अघिल्लो वर्ष नै पनि लगभग अरू महिनाको भन्दा असोजमा १६ प्रतिशत बढी रेमिट्यान्स आएको थियो । त्यसैले हामीले असोज १ गरे देखि हाम्रो नयाँ स्किम आउँदै छ । अब यो योजना अन्तर्गत हाम्रा ग्राहकहरूले स्कुटर देखी हरेक दिन आकर्षक पुरस्कार पाउने छन् । हरेक हप्ता साप्ताहिक पुरस्कार पनि पाउने छन् ।
त्यसबाहेक यस बेलाका हरेक कारोबारमा बोनस उपलब्ध गराउने पनि यो योजनामा कार्यक्रम छ । अझ नगदमा पठाएको रेमिट्यान्स कसैले वालेटमा लिन्छ भने अतिरिक्त बोनस समेत दिन्छौँ । त्यसै गरी, कतार, मलेसिया लगायतका अन्य मध्यपूर्व र खाडी मुलुकहरूमा पनि हाम्रो सेवा विस्तार गर्न गइरहेका छौँ ।